Parador de León, ihe ịtụnanya nke Spanish Plateresque | Akụkọ Njem
Luis Martinez | | omenala, León
Parador de León dị na otu n'ime ụlọ ihe atụ kachasị mma nke obodo Castilian: the ebe obibi ndị mọnk nke San Marcos. Emi odude ke mben Osimiri Bernesga, mmalite ya malitere na narị afọ nke XNUMX, mgbe e wuru ụlọ mbikọ iji nabata ndị njem ala nsọ na-aga Santiago de Compostela.
Agbanyeghị, ụlọ ahụ anyị maara taa wuru na narị afọ nke XNUMX na mkpọmkpọ ebe nke gara aga na ekele onyinye sitere na Ferdinand onye Katọlik. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ịnọ na Parador de León, ị ga-anụ ụtọ otu n'ime Spanish ọla ọla. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu ọmarịcha ụkpụrụ ụlọ a, anyị na-agba gị ume ka ị gụọ akwụkwọ.
1 Obere akụkọ banyere Parador de León
2 Akụkụ ndị dị na Parador de León
2.2 Na cloister
2.4 Akụkụ a kara aka na Parador de León
3 Ojiji nke ebe obibi ndị nọn nke San Marcos
4 Otu esi aga Parador de León
Obere akụkọ banyere Parador de León
Dika anyi gwara gi, ezubere ebe obibi ndi nchu aja nke San Marcos site na onyinye nke Fernando de Aragón. Otú ọ dị, ọrụ ahụ amaliteghị ruo mgbe ọchịchị nke Carlos m. Iji bido iwu ahụ, e goro ndị na-atụ ụkpụrụ ụlọ atọ: Martin de Villarreal, onye ga na-elekọta facade; Juan de Orozco, ndị ga-arụ ọrụ na chọọchị, na Juan de Badajoz nke Nta, onye ga-akwado sacristy na cloister.
Ihe owuwu nke ebe obibi ndị mọnk nke San Marcos dịgidere ihe karịrị otu narị afọ, na-agwụ na 1679. Agbanyeghị, na narị afọ nke iri na asatọ, e mere nnukwu mmụba nke ụlọ ahụ nke na-agakọ yana akụkụ ndị ọzọ nke owuwu ahụ.
Cloister nke Parador de León
Akụkụ ndị dị na Parador de León
Ebe obibi ndị nọn nke San Marcos bụ ọla dị egwu. Dịka anyị kwuru, a na-atụle ya otu n'ime ụlọ kachasị mkpa nke Spanish Renaissance na kwa ihe ịtụnanya nke Plateresque. Iji kọwaara gị ya, ọ kachasị mma na anyị nwere ọdịiche dị n'akụkụ ya.
Kpamkpam na ya na ị pụrụ ịhụ ọtụtụ n'ime atụmatụ plateresque nke ụlọ ahụ. Pilasters, mbo nke na-emechi ọnụ ụzọ na ihe ndị ọzọ dị na ụdị a. Ọ bụ facade nke otu kwaaji nke nwere ala abụọ gwụchara kere. Nke mbụ nwere windo okirikiri, ebe nke abụọ nwere mbara ihu na ogidi ndị nwere balustrades.
Plinth na-mma na medallions na-anọchi anya odide si Greco-Latin ochie na ndị ọzọ a ma ama site na akụkọ ihe mere eme nke Spain. Maka akụkụ ya, ụlọ elu nke ụlọ eze gụnyere obe nke Santiago na ọdụm.
Dị ka ihe mkpuchi, ọ bụ n'ezie ikpọ. O nwere aru abuo na nnukwu azu ya na ya elu isi na-anọchite Saint Mark. Ihe efu ya bu baroque ma tinye uwe nke ogwe aka Santiago na nke Alaeze Leon.
Ọ nwere akụkụ anọ. Abụọ n'ime ha wuru na narị afọ nke XNUMX site na ọrụ, dị ka anyị gwara gị, nke Juan de Badajoz nke Nta. Otú ọ dị, ị nwekwara ike ịhụ ihe mgbada basara n'ihi onye ama ama Franco-Spanish Juan de Juni na-anọchi anya Ọmụmụ. Maka akụkụ nke ha, e wuru ngalaba abụọ ndị ọzọ na narị afọ nke iri na asaa na nke iri na asatọ.
N'ikpeazụ, chọọchị ahụ bụ akụkụ nke atọ nke Parador de León. Ọ na-aza Gothic Hispanic oge a na-akpọ Kingsdị ndị eze Katọlik. Emechara owuwu ya na 1541, dị ka ihe àmà gosipụtara na ị nwere ike ịhụ na niche na facade.
Ọnụ ụzọ ụlọ nsọ ahụ na-eweta a akwa ribbed volt nke ụlọ elu abụọ dị n'akụkụ ya. I nwekwara ike ịhụ na ya abụọ reliefs nakwa ruru ka Juan de Juni, nke na-anọchite anya Calvary na Ebe E Si Nweta.
Maka akụkụ nke ya, ime ahụ nwere obosara sara mbara nke gafere site na transept nwere ogwe. N'ime nnukwu ebe ịchụàjà ya, Annunciation na Apostolate pụtara ìhè, ma site na narị afọ nke XNUMX. Ma, i kwesịkwara ile anya na coro, tumadi ọrụ Juni, ọ bụ ezie na akụkụ ya dị ala ruru Guillermo Doncel.
Akụkụ a kara aka na Parador de León
Ọ bụ ezie na ọ nweghị nnukwu mkpa dị ka akụkụ ndị gara aga, nke maka ụlọ nke Parador de León nwekwara ebe nkiri ị ga-enye. N'etiti ha nchịkọta tapestries, ochie ngwá ụlọ na osisi a tụrụ atụ. Ma karịa ihe niile, ihe ọrụ ihe osise na icho mma ụlọ na na n'ihi na ndị dị otú ahụ dị ka Lucio Munoz, Joaquin Vaquero Turcios o Alvaro Delgado Ramos.
Ime nke Parador de León
Ojiji nke ebe obibi ndị nọn nke San Marcos
Ka ọ dị ugbu a, ebe obibi ndị nọn nke San Marcos bụ, dị ka anyị kwuru, bụ Parador de León. Agbanyeghị, n'akụkọ ihe mere eme, o nwewo ọtụtụ ojiji ndị ọzọ. Na mbu, e wuru ya dika ndị ọrịa ala ọzọ onye mere Camino de Santiago.
Mana, ọ dị nwute, otu n'ime ihe ndị a na-eme ugboro ugboro nke ndị nọn bụ nke ụlọ mkpọrọ. N'ime ya onye edemede ukwu nọrọ afọ anọ zoro ezo Francisco de Quevedo n'usoro nke ndi di ike Count-Duke nke Olivares. Ka oge na-aga, n’oge a na-alụ Agha Obodo, ọ bụ ogige ịta ahụhụ maka ndị mkpọrọ ndị Republican.
N'ikpeazụ, ojiji ndị ọzọ enyere Parador de León ugbu a bụ ụlọ ọrụ ozi nke Society of Jesus, ụlọ ọrụ ndị agha General Army, ụlọ ọgwụ ụlọ mkpọrọ, ụlọ akwụkwọ nkuzi na ọbụna ụlọ akwụkwọ anụmanụ.
Na 1875, ndị León City Council chọrọ ịkwatu ya, nke gaara abụ ọdachi n'ezie maka ihe nketa nka Spain. N'ụzọ dị mma, ọgụgụ isi meriri ma ọ bụghị.
Otu esi aga Parador de León
Ọ bụrụ na ị gaa obodo Castilian, anyị na-akwado gị ka ị nọrọ na ịtụnanya Plateresque a. Ozugbo León na iru parador, ihe mbu i kwesiri ima bu na odi na Ogige St. Mark, na-esote akwa mmiri ahụ.
Ihu nke Parador de León
Ọ bụrụ na ị gaa ugwu, ị ga-erute n’obodo site A-66. Ga-ahapụrịrị ya n'ime Nwa agbọghọ nke Wayzọ ma were ya N-120. N'otu oge n'obodo ahụ, Avenida del Doctor Fleming na ngalaba ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ga-akpọrọ gị gaa na paradaịs.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ n you si na ndịda, n theọwụwa anyanwụ ma ọ bụ n`ebe ọdịda anyanwụ bịa, ma eleghị anya ị ga-abịarute obodo n byebe ahụ LE-30 na LE-20. N'okwu a, soro soro Avenida de Europa wee soro Avenida de la ụlọ akwụkwọ anụmanụ ịgara San Marcos.
Na mmechi, Parador de León ma ọ bụ Convent of San Marcos Ọ bụ ihe ịtụnanya nke Spanish Plateresque na otu n’ime akara nke obodo Castilian. Ọ bụ ihe owuwu nwere ọdịnala dị ka akụkọ ntolite nke ị ga-eche na a ga-ebuga gị n'oge ndị ọzọ. Chọghi ihu ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » León » Parador de León